Madaxweyne Obama oo u digay Ruushka - BBC News Somali
Madaxweyne Obama oo u digay Ruushka
17 Disembar 2016
Iyadoo ay weli isa soo tareyso xiisadda afka ah ee u dhaxeysa wadammada Mareykanka iyo Ruushka ayaa Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu sheegay in bishii Sibteembar ee sanadkan uu Madaxweyne Vladimir Putin uga digay cawaaqibka ka dhalan kara Computer-rada ay jabsanayaan haddii buu yiri ay sii wadaan.
Madaxweynaha waxaa kale oo uu sheegay in warar dhanka mukhaabaraadka dalka Mareykanka ee uu helay xilligii doorashada ay muujinayaan in Ruushka uu fara galin toos ah ku sameeyay doorashada Mareykanka isagoo iskudayaya in uu u dhaco email-lada Xisbiga Dimuqraadiga.
Maalintii Khamiista ayaa afhayeen u hadlay Aqalka Cad ee Mareykanka waxa uu sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku lug lahaa weerrarada dhanka Internet-ka ee lagu soo qaaday ololaha doorashada Mareykanka.
Ruushka ayaa dhankiisa arrintaasi si adag u beeniyay.
Madaxweyne Obama ayaa ku booriyay Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka, Donald Trump, in marka uu la wareego xafiiska uu arrintaasi si dhab ah ula tacaalo, inkastoo ilaa iyo haatan aysan kala cadeyn in arrintaasi ay saameyn ku yeelatay natiijada doorashada iyo inkale.